WAR DEG DEG: Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay Maqaayada Hooyooyinka ee Muqdisho – STAR FM SOMALIA
WAR DEG DEG: Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay Maqaayada Hooyooyinka ee Muqdisho
Waxaa daqiiqado yar kahor Weerar ismiidaamin ah oo la sheegay in uu fuliyay nin waxyaabaha qarxa isku soo xiray uu ka dhacay Guriga hooyooyinka ee Degmada Xamar Weyne, gaar ahaan Maqaayada The Village ee halkaasi kutaala.
Qaraxa ayaa ahaa mid aad u xooganaa si weyna looga maqlay qeybo badan oo kamid ah Magaalada Muqdisho, waxaana qaraxa ka dhashay qasaaro badan oo isugu jira dhimaho iyo dhaawac.
Goobjooge ayaa noo sheegay in waxyaabaha qarxa isku soo xiray uu dhaxda ka galay goob ay dad badan fadhiyeen oo kutaala Maqaayada The Village kadibna uu is qarxiyya, waxaana maqaayada xiligaasi ku sugnaa Wariyaal iyo dad kale oo badan.
Xaalada goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa ah mid aad u kacsan, waxaana halkaasi hada kusii qul qulaya ciidamada amaanka Dowlada Soomaaliya iyo gaadiidka gurmadka deg dega ah.
Waa Weerarkii sadaxdaad oo lagu qaado Maqaayada The Village , waxaana horey weeraro ismiidamain ah oo sidan oo kale loogu qaaday Maqaayada ku dhintay Wariyaal iyo dad kale oo u badan shacab.
Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxayo qaraxii ka dhacay maqaayada The village (Daawo Sawirada)